लोकसेवाले खुलायो नायब सुब्बामा आवेदन - Everest Dainik - News from Nepal
लोकसेवाले खुलायो नायब सुब्बामा आवेदन
काठमाडौं, पुस २८ । लोकसेवा आयोगले खुला तथा समावेशीबाट पुस २७ गते बुधबार विभिन्न पदहरुमा निम्न योग्यताअनुसार एक हजार एक सय १२ जना नायब सुब्बाका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ ।
लोकसेवा आयोगले निजामती सेवाका विभिन्न समूहका लागि दरखास्त आह्वान गरिएकामध्ये ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा र ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदपूर्ति गरिनेछ ।
यो आवेदन अनलाइनमार्फत भरिने व्यवस्था गरिएको छ । उम्मेदवारहले आवेदन भर्ने म्याद यही माघ १८ गतेसम्म रहेको छ भने दोब्बर दस्तुर तिरेर बुझाउन पाउने चाहिँ माघ २५ गतेसम्म रहेको छ ।
आवेदन भर्नका लागि खुलाको रु.४०० र प्रत्येक समावेशी समूहको लागि थप रु. २०० तथा परराष्ट्र सेवाको थप पत्रको लागि छुट्टै रु. २००।– (दुई सय) थप दस्तुर बुझाएर भर्न पाइने छ । आयोगको नियमित क्यालेन्डरअनुसार नै दरखास्त आह्वान गरिएको हो।’
सबैभन्दा बढी प्रशासन सेवामा– आयोगले सबैभन्दा बढी प्रशासन सेवामा माग गरेको छ । प्रशासन सेवाअन्तर्गत आठ सय ९१ जना माग गरिएको छ ।
जसमा प्रशासन सेवाअन्तर्गत रहेको सामान्य प्रशासन समूहका लागि पाँच सय ९२, लेखा समूहका लागि दुई सय २२ र राजस्व समूहका लागि ७७ जना माग गरिएको छ ।
यसैगरी, न्याय सेवातर्फ न्याय समूहका लागि एक सय ६०, सरकारी वकिल समूहमा १६ र कानुन समूहमा ६ जनाको माग भएको छ ।
यसैगरी, लेखा परीक्षण सेवाका लागि चारजना, परराष्ट्र सेवाका लागि पाँचजना र व्यवस्थापिका–संसद्का लागि खुलातर्फ १६ जना मागिएको छ भने आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि २४ जना मागिएको छ । यो माग भने व्यवस्थापिका–संसद् आफैँले पदपूर्ति गर्नेछ ।
फागुन महिना पहिलो चरणको परीक्षा हुने– आयोगले देशका विभिन्न नौवटा अञ्चल कार्यालय र पाँचवटा क्षेत्रीय निर्देशनालयमार्फत नायब सुब्बाको परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ ।
खुला तथा आन्तरिकतर्फ प्रथम चरणको परीक्षा फागुनमा र दोस्रो चरणको वैशाखमा हुनेछ भने लिखित परीक्षाको नतिजा साउन–भदौमा तथा सिफारिस असोज महिनासम्म गरिने आयोगले जनाएको छ ।
ट्याग्स: abedan, subba